Umgangatho wemveliso yezichumiso zomgquba - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Isichumisi esenziwe ngomgubo esidla ngokusetyenziswa ukuphucula umhlaba kunye nokubonelela ngezondlo zokukhula kwesityalo. Ziyakwazi ukubola ngokukhawuleza xa zingena emhlabeni, zikhuphe izondlo ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba umgquba oqinileyo ophefumlelweyo ufunxwa kwisantya esincinci, izichumisi zomgubo ezigciniweyo zigcinwa ixesha elide kunezichumisi ezingamanzi. Ukusetyenziswa kwesichumiso esenziwe ngezinto eziphilayo kunciphise kakhulu umonakalo kwisityalo ngokwaso nakwimeko-bume yomhlaba.
Isichumiso sendalo sinika izinto eziphilayo emhlabeni, ngaloo ndlela ke sinika izityalo izondlo-mzimba abazidingayo ukunceda ukwakha iinkqubo zomhlaba ezisempilweni, endaweni yokuzitshabalalisa. Isichumiso sendalo ke ngoko sinamathuba amakhulu eshishini. Ngothintelo ngokuthe ngcembe kunye nokuthintelwa kokusetyenziswa kwesichumiso kumazwe amaninzi nakumasebe afanelekileyo, ukuveliswa kwesichumiso sendalo kuya kuba lithuba elikhulu kwishishini.
Nawuphi na umbandela wemveliso eluhlaza unokuvundiswa ube ngumgquba. Ngapha koko, umgquba uyacolwa uze uhlolwe ukuze ubengumgangatho ophezulu othengiswayo ongumgubo wezichumiso.
1. Ilindle lezilwanyana: inkuku, ubulongwe behagu, ubulongwe beegusha, ukucula kweenkomo, umgquba wehashe, umgquba womvundla, njl.
2, inkunkuma yemizi-mveliso: iidiliya, iviniga slag, intsalela yecassava, intsalela yeswekile, inkunkuma ye-biogas, intsalela yoboya, njl.
4. Inkunkuma yasekhaya: inkunkuma ekhitshini.
5, udaka: udaka lwedolophu, udaka lomlambo, udaka lokucoca ulwelo, njl.
Inkqubo efunekayo ukuvelisa izichumisi eziyimpuphu ezifana nomgubo wesonka se-neem, icocoa peat powder, umgubo weqokobhe lomgubo, umgubo wenkomo owomileyo, njl.njl
Umgubo wemveliso yezichumiso zomgubo ocoliweyo unobuchwephesha obulula, iindleko ezincinci zezixhobo zotyalo mali, kunye nokusebenza okulula.
Sinikezela ngenkxaso yobuchwephesha beenkonzo zobugcisa, ukucwangcisa ngokweemfuno zabathengi, imizobo yoyilo, iingcebiso zokwakha kwindawo, njl.
Inkqubo yemveliso yezichumisi yomgubo ocoliweyo: umgquba-ukucola-isisefo-ukupakisha.
Izinto zokwenza izinto eziphilayo ezenziwa rhoqo zenziwa ngedumper. Kukho iiparameter ezininzi ezichaphazela umgquba, ezizezi ubungakanani bamasuntswana, umlinganiselo wekhabhon-nitrogen, umxholo wamanzi, umxholo weoksijini kunye nobushushu. Ingqalelo kufuneka inikwe:
1. Zityumze izinto zibe ziincinci;
2. Umlinganiselo wekhabhon-nitrogen wama-25 ukuya kuma-30: 1 ngowona mgangatho ufanelekileyo wokugalela umgquba. Ezona ntlobo zininzi zezinto ezingenayo, kokukhona kunokwenzeka ukuba ukubola kusebenze ngokugcina umlinganiselo weC: N ofanelekileyo;
3. Umxholo wobuninzi obulungileyo bezinto zokwenza umgquba ngokubanzi umalunga ne-50% ukuya kuma-60%, kwaye i-Ph ilawulwa ngo-5.0-8.5;
4. Ukuqengqeleka kuya kukhupha ubushushu be-compost. Xa izinto zibola ngokufanelekileyo, amaqondo obushushu ancipha kancinci ngenkqubo yokubhukuqa, emva koko abuyele kwinqanaba elidlulileyo ngaphakathi kweeyure ezimbini okanye ezintathu. Le yenye yeenzuzo ezinamandla zedumper.
Isixhobo esisezantsi esime nkqo sisetyenziselwa ukutyumza umgquba. Ngokutyumza okanye ukusila, izinto ezinobumba kumgquba zinokubola ukuthintela iingxaki ekupakisheni kwaye zichaphazele umgangatho wezichumiso eziphilayo.
Umatshini we-roller sieve awususi ubumdaka kuphela, kodwa ukhetha iimveliso ezingafanelekanga, kwaye uhambisa umgquba kumatshini wokusefa ngesihambisi sebhanti. Le nkqubo ifanelekile koomatshini bokuhluza igubu abanemingxunya yobungakanani obuphakathi. Ukucoca ulwelo kubalulekile ekugcineni, ukuthengisa kunye nokusetyenziswa komgquba. Ukucoca ulwelo kuphucula ukwenziwa komgquba, kuphucula umgangatho womgquba, kwaye kuluncedo ngakumbi ekupakisheni nasekuhambiseni okulandelayo.
Isichumisi esingafakwanga siza kusiwa kumatshini wokupakisha ukuze kuthengiswe isichumisi esingumgubo esinokuthengiswa ngokuthe ngqo ngokobunzima, ngesiqhelo nge-25 kg ngengxowa nganye okanye i-50 kg ngengxowa nganye njengevolumu yokupakisha enye.